China TLS Wall Yakakwira Type Relay otomatiki Voltage Stabilizer (LED Meter) fekitori nevatengesi | Tailei
TLS madziro emadziro akateedzana AC otomatiki emagetsi stabilizer, inova ndiyo inotungamira sarudza yeAmerican chip nekambani yedu kune redunhu bhodhi .Iri rusvingo gomo voltage regulator inogona kuita RELAY CONTROL kana SERVO MOTOR CONTROL,nekuti iyi ine hombe yemukati nzvimbo.
Kudengenyeka kwemagetsi mumagetsi network pamusoro pemitemo inobvumidzwa kunotungamira kumhedzisiro yakaipa yezvigadzirwa zvemagetsi nemagetsi. AC magetsi ekugadzirisa anoitirwa kupa mhando uye rakachengeteka basa remidziyo yakasiyana pasi pemamiriro emagetsi asina kugadzikana.
Aya akateedzana emagetsi ekudzikisira anogadzirwa mukushandisa pamwe nematanho epasi rose ekudzivirira kubva kumagetsi emagetsi ekukurumidzira, kutanga nedzimba dzemaguta uye kupera nedzimba dzekugara uye dzekugadzira dzakawanda.
1.Wide yekuisa magetsi: AC 140 ~ 260V kana 100-260VAC Kana gadzirisa
2.High technology: yakarongedzwa kudzora makomputa
3.Fashoni dhizaini:Akatungamirira ratidza iyo inogona kuratidza ese mabasa ekudzivirira.
4.Quality inishuwarenzi: Main spare zvikamu zvakagadzirwa nesu, semuenzaniso, shanduko, pcb.
5.Yakakwana dziviriro basa: pamusoro / yakaderera voltage chengetedzo, pamusoro-kupisa / mutoro dziviriro, pfupi wedunhu chengetedzo.
6.Option basa: ine voltage regulator uye mains inopa maviri mhando kuburitsa voltage sarudzo yekuita, mune mains inopa ine yakagadzikana mwaka, mushandisi anogona kuisa voltage stabilizer mune mains supply state, hapana simba rekushandisa, iri rezvehupfumi uye nyore.
7.Kubudirira kwepamusoro: Zvinopfuura 95%
140-260v / 100-260v Kana gadzirisa
Nguva pfupi ye6, nguva yakareba zana nemakumi masere
1. Iyo voltage yemagetsi network inoenderana nezvinodiwa neAVR, kuitira kushanda kwakanyanya.2. Unganidza mapulagi ese zvakachengeteka.3. Gara uchinja magetsi emagetsi eAVR kutanga, magetsi emagetsi ekuchinja (Kutadza kuita kudaro kunogona kukonzera fiyuzi yeAVR kuvhuvhuta)4. Kuti uwane mhedzisiro, usashandise kana mamiriro ekuwandisa aripo.5. Usashandise mukunyanyisa kwakanyorova kana kupisa zvinobatira; dzivisa kusangana nechero zvinwiwa.
6. Hukama huri pakati pechibudiro chemagetsi nemagetsi ekupinza sekutevera mufananidzo nedhayagamu:
Pashure: TLN Wall Gomo Voltage Inodzikamisa
Zvadaro: TSDL Wall yakarembera servo AC voltage stabilizer
Wall Yakakwidzwa 5kva Voltage Stabilizer
Wall Yakakwira otomatiki Voltage Stabilizer
Rusvingo-Yakakwira Voltage Stabilizers
SDR Series Zvizere otomatiki Voltage Regulator
TLS, H, 0.5K-10KVA Yakazara Metal Masvingo Akakwira Auto ...
TLBR 2000VA LED yakatasva Euro socket otomatiki vol ...
TDGC2J Uye TSGC2J Voltage Regulator
© Copyright - 2010-2020: All Rights Reserved. Matipi - Zvinowanikwa Zvigadzirwa - Sitemap - Mobile Site Voltage Stabilizer Ye Amplifier, 4kva Voltage Inodzikamisa, Dhijitari Voltage Inodzikamisa For Ac, 2kva Voltage Inodzikamisa, Voltage Stabilizer YeImba Yese Imba, Voltage Inogonesa 5000va, Zvese Zvigadzirwa